China M52-hazavana farany hazavana mahery vaika 24 * 60W taratra tantely mihetsiketsika loha fanamboarana sy orinasa | Mihoatra
M52-hazavana farany hazavana mahery vaika 24 * 60W taratra hazavana mihetsiketsika eo amin'ny loha tantely
farany fanaovan-jiro dingana mahery 24 * 60W taratra tantely tantely mihetsiketsika loha no taratra mahery vaika Led + manasa + tantely tantely nitarina loha any amin'ireo ozinina sinoa.
Izahay no orinasa voalohany ao Shina izay manomboka R & D ny 40W sy 60W nateraka loharanon-tantely vokarin'ny maso mihetsiketsika loha. Ity modely ity dia mety amin'ny kaonseritra, fandaharana amin'ny fahitalavitra, fety, seho fiara, teatra, fifaninanana ara-panatanjahantena sns amin'ny toerana lehibe. Ampiasain'ny 24 x 60W avo Powered miaraka amin'ny optika avo indrindra sy ny solomaso famokarana hazavana avo lenta, misy vokany piksela mitarika.
Nohavaozina teboka iray tena manafatra, manao boribory ny jiro. Ny rafitra optika dia manolotra zana-kazo fanitsiana avy amin'ny 3.5 ° -45 ° izay afaka manarona sehatra fampisehoana marobe.
Ny birao tariby mihodina amin'ny lafiny roa miaraka amin'ny hafainganana voafehy dia mamorona vokatra voninkazo manjelanjelatra. Ny effets vidéo mavitrika dia mora azo amin'ny alàlan'ny fandrafetana ireo piksely tsirairay izay fehezin'ny birao DMX na amin'ny protokol Art-Net.
farany fanaovan-jiro dingana mahery 24 * 60W taratra tantely tantely mihetsiketsika loha
Mazava ho azy fa fanavaozana ara-teknolojia ity hazavana ity, namboarina farany namboarina sy novolavolaintsika manokana, izay famoahana hazavana tonga lafatra dia mitondra famirapiratana sy loko mazava. Ankoatr'izay, ity optika vaovao ity dia mamorona toerana misy jiro boribory, midika izany fa na dia amina sehatra tena matihanina aza dia azo ampiasaina amin'ny fahafaham-po.
Ny fiantsonana voalohany naneho an'ity modely ity dia ny fampirantiana jiro 2021 Guangzhou Get Show, nahazo dera maro avy amin'ireo mpitsidika sy ireo manam-pahaizana momba ny fampisehoana an-tsehatra. Saika ny rehetra no talanjona tamin'ny famirapiratany ultra, ny effets mahatalanjona ary ny habeny (354 × 444 × 477mm) ho an'ny hery lehibe toa izao. Manaporofo indray, i Beyond dia manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana sy ny famokarana jiro LED mihoatra ny an'ny orinasa hafa.
24 teboka manome 3.5 ° ny 45 ° zoro zana-kazo, DMX512, RDM ary ny Art-net protokol misy, maodelin'ny fantsona 5 DMX afaka hihaona amin'ny fampiasana samihafa ny programa. Ny fiarovana dia miaro amin'ny hafanana, raha avo loatra ny mari-pana amin'ny loha, dia hampihena ny famirapiratan'ny taratra ny jiro.
Nampiasa hidin-trano mora / mihidy hidin-trano izy io mba hanamorana ny fitantanana na ny fonosana ny jiro. Misy akanjony mivalona koa.
Loharano nateraka 24 * 60W 4in1 RGBW no nitarika Pan: 540 °, fahamendrehana 2.11 ° / dingana, fahamendrehana manara-penitra: 0,008 °
Zoro zom 3,5 ° - 45 ° Mitongilana: 270 °, marina 0,86 ° / dingana, tsara-tuning mety: 0,0034 °
Fanjifana herinaratra 1500W Mampiasa rafitra famerenana kaody matevina
Fomba fanaraha-maso DMX512 // Music / RDM / ArtNet Asehoy: fisehoana loko TFT 1,8-inch, 180 ° azo ovaina
Data ao anaty / Out socket: Socket 3-pin & 5-pin XLR
Mode DMX 21/25/33/129/106 CH (ArtNet) Socket Power: Power Con miditra / mivoaka
Naoty fiarovana: IP20
Fanasana fanamiana + fahatsapana Super beam + Vokatry ny maso tantely manaitra Fomba fanaraha-maso DMX512 // Music / RDM / ArtNet
Fanaraha-maso tariby tarika Enable mba hifehezana hazavana avy amin'ny menio na console Mode DMX 21/25/33/129/106 CH (ArtNet)
0-100% Linear dimmer, flicker free famaritana
Amin'ny alàlan'ny ankehitriny, amin'ny alàlan'ny herinaratra, amin'ny fiarovana ny hafanana
Ny hafainganam-pandehan'ny asa fanala dia azo ovaina arakaraka ny mari-pana amin'ny loha Refy: 354mm × 444mm × 477mm; NW: 25 GKS
Ny fampahalalana momba ny asa maivana dia azo vakiana amin'ny menio Fonosana mahazatra: baoritra; Tranga sidina amin'ny safidy
Preset 44 karazana loko makro miloko Fanamarinana
preset 121 karazana effets makro vokany CE, RoHS
Teo aloha: F800-9 * 60w andry sy fanasan-damba mihetsika amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso pixel
Manaraka: F720-Fahefana mahery manasa fanasan-dàlana zoom zoom any ivelany miaraka amin'ny 18x40W led